याङवरकमा एक सातापछि दुई जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि « Mechipost.com
याङवरकमा एक सातापछि दुई जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
प्रकाशित मिति: १४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार २१:०७
थर्पू, १४ जेठ ।
याङवरक गाउँपालिकामा एक सातापछि थप दुई जना स्थानीयवासीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
याङवरक गाउँपालिकाको आज (जेठ १४, शुक्रवार)को कोभिड–१९ दैनिक प्रतिवेदनअनुसार वडा नं. ४ थर्पूमा एक महिला र एक पुरुष गरी दुई जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । आज याङवरक–१ का एक जना तथा याङवरक–४ का चार जनामा गरिएको एण्टिजेन परीक्षणमा दुई जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
याङवरकमा यसअघि पछिल्लो पटक गत जेठ ५ गते याङवरक–३ फलैंचाका दुई जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यस्तै सोभन्दा अघि वैशाक ३१ गते वडा नं. २ मै दुई जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो ।
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दोश्रो लहरमा गाउँपालिकाको वडा नं. १, ४ र ६ मा समुदायस्तरमा सङ्क्रमण देखिएपनि गाउँपालिकाले परीक्षण बढाई गाउँपालिका क्षेत्रलाई लकडाउन गरेपछि सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएको थियो । पछिल्लो पटक देखिएका सङ्क्रमितहरु समेत हालै गाउँपालिका बाहिरबाट आएका बुझिएको छ ।
याङवरकमा हालसम्म कूल सङ्क्रमितको संख्या ३८ पुगेको छ । जसमध्ये १४ जना महिला र ६ जना बालबालिका छन् ।
सङ्क्रमितहरुमध्ये हालसम्म ३० जनाले सङ्क्रमणमुक्त भएको गाउँपालिकाको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये तीन जना ७८ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरु छन् । हाल गाउँपालिकामा आठ जना सक्रिय सङ्क्रमितहरु रहेको र उनीहरु होम आइसोलेसनमा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
होम आइसोलेसनमा रहेकाहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र गाउँपालिकाले नियमित निगरानी गरिरहेको जनाएको छ । याङवरकमा हालसम्म छ वटै वडाका गरी ११८ जनाको एण्टिजेन परीक्षण भएको छ ।
याङवरक गाउँपालिकाले अक्सिजन सहितको पाँच बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माण गरेको छ ।